ဤဆုအား GCMoney(2500) ဖြင့် ကံစမ်းပါ။
Rocket Online Shopping မှ Self Stirring Mug အား ကံထူးရှင် တစ်ယောက်အတွက် မဲဖောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Rocket Online Shopping မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။
လက်ဆောင် ပေးချင်တာလား။ လူတိုင်းက ကိုယ့် ချစ်သူကြိုက်မဲ့အရာလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးချင်ကျတာတော့ အမှန်ပဲလေ။ ချစ်သူလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ ဖေဖေ၊ မေမေ၊ ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွားလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ အကြိုက်လေးတွေ စဉ်းစားပေးပီး လက်ဆောင်ပေးရတာတော့ ပိုရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်သူ(သို့) ကိုယ် ရဲ့အလေးထား တန်ဖိုးထားရတဲ့သူက ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီခွက်လေးက ကော်ဖီချစ်သူတွေ အတွက် ရင်ခုန်စရာ ကော်ဖီဖျော်တဲ့ခွက်လေးပါပဲ။ ဇွန်းခွက်မလို လက်ကိုင်းမှာပါတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ။အထဲမှာ စတီးခံထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အပူက်ုလည်း ကြာရှည်ခံပါတယ်။ ကော်ဖီ ကြိုက်သူတွေအနေနဲ့လည်း ခရီးသွားတဲ့အခါ အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ ခွက်လေးပါပဲ။ ဈေးနှုန်း – ၁၂၀၀၀ ကျပ်။ ပို့ခ - မြို့တွင်း – ၂ထောင်(ရန်ကုန်)၊ မြို့ပြင် – ၃ထောင်(ရန်ကုန်)၊ မန္တလေး – ၅ထောင်၊ မြိတ် – ၄ထောင်
ဧပြီလ ၂၀၁၆ မှစ၍ ၂သောင်း ၅ထောင် အထက်ဝယ်ယူသော customer အားလုံးကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့ ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။ (Yangon / Mandalay / Mawlamyine and Myeik)
ခြေနှိပ်ဆေးကန် တနေကုန်ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရသူများနှင့်မတ်တတ်ရပ်ရသူများအတွက်တကိုယ်လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းများကိုဖယ်ရှားပေးမယ့်ခြေထောက်နှိပ်စက်လေးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ အသာမာတက်နေခြင်း၊ ခြေဖနောင့်ကွဲနေခြင်းများကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အပူချိန်ကိုလိုသလိုထိန်းညှိနိုင်ပြီးရေထည့်ပြီး စက်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အလိုအလျောက် ရေနွေးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ လူကြီးမိဘများကိုလက်ဆောင်ပေးရမှာလည်း သင်းတော်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။ ဈေးနှုန်း – ၃၈၀၀၀ (Delivery free in Yangon) မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများ အိမ်အရောက် ၃ထောင် တခြားမြို.များကိုတော့ ရန်ကုန် ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်ကာလနဲ.အညီ မီးငြိပူဇော်နိုင်မယ့် လျှပ်စစ် ဖယောင်းတိုင် လေးကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ လျှပ်စစ် ဖယောင်းတိုင် ဖြစ်တဲ့အတွက် မီးဘေး အန္တရာယ်မှလည်း ကင်းဝေးနိုင်မှာပါ။ USB လေးနဲ. အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ကြိုးနဲ. တူတူဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးပူဇော်ရာမှာ ဖြစ်စေ၊ အလှ ဖယောင်းတိုင်လေးများ စုဆောင်းတာဖြစ်စေ၊ Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း – ၁၉၀၀၀ (Delivery free in Yangon) မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို့ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။
PPUCCO air fresher
မိတ်ဆွေတို့ အိမ်ခန်းထဲက အနံ့အသက်များ၊ ကားကြီး၊ ကားလေးထဲက မကောင်းတဲ့အနံ.အသက်များကို စုပ်ယူပေးမဲ့ အရုပ်လေးများ ရောက်ရှိလို. လာပါပြီ။ အရုပ်နာမည်က PPUCCO ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင် – အနီ၊ အပြာ အိမ်ခန်းထောင့်လေးမှာ ဖြစ်စေ၊ ကားမှန်ရှေ.နားမှာ ဖြစ်စေ၊ နောက်မှာ ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူစွာ ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲယားကွန်းအနံ.အသက်တွေကြောင့် မူးချင်ချင် ဖြစ်နေရင်တော့ အနံ့ပျောက် အရုပ်တစ်ရုပ်လောက် ဆောင်ထားလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း – ၉ထောင်ကျပ် (Delivery free in Yangon) မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးများ အားလုံး ပို့ခ ၃ထောင် ကျပ်သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ခုဝယ်ရင် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ကျန်မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်။
နုထွေးသန့်ရှင်းတဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံပိုင်ဆိုင်ဖို့။ လှပတဲ့ခြေထောက်တစ်စုံကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းရယူလိုက်ပါ။ ခြေလေး၊ လက်လေးက အသားမာ တွေကို ၅မိနစ်လောက် အချိန်ပေးရုံနဲ့ နူးညံ့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖနောင့် ကွဲသူ အသားမာတတ်နေသူတွေသုံးသင့်တဲ့ စက်ကလေးပါ။ ဘက်ထရီ ပါဝါနဲ့ အသုံးပြုရတာ ဖြစ်ပြီး အမြန်နှုန်း နှစ်ခုနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဘဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ထိုးပေးမဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်၊ Passport အိတ်လေးတွေ (PreOrder)
sis တို. နာမည်ထိုးပေးမဲ့ Passport ထည့်ရန် အိတ်လေးများ၊ လက်ကိုင်အိတ်လေးများကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ လက်ဆောင် ပေးဖို.လည်း သင့်တော်တယ်နော်။ ၂၉ ရက်နေ.မှာ Order ပိတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်ပါက https://goo.gl/forms/7MwoynIiUZjdwAmv1 တွင် Form ဖြည့်ပေးပါ။
ပစ္စည်းအလေးချိန် Kg (ကီလို) ချိန်နိုင်မယ့် Portable ကီလိုချိန်စက်ကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ခရီးသွားအိတ်သယ်ခြင်း၊ စာတိုက်တွင် ပစ္စည်း ခဏခဏ ပို.နေရသူများ အတွက် သင်တေ့ာ်ပါတယ်။ လိုချင်သော ဒီဇိုင်းကို save လုပ်ပြီး comment တွင် ဖြစ်စေ၊ message တွင် ဖြစ်စေ၊ Viber တွင် ဖြစ်စေ၊ ပေးပို. Order တင်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း – ၁သောင်း ၇ထောင် Delivery free in Yangon and အဝေးပြေးကားဝင်း စောင့်ဆိုင်းချိန် – ရက် ၂၀။ ရန်ကုန်က မှာသူများ အနေဖြင့် ငွေကြိုလွဲစရာ မလိုပါ။ နယ်က မှာယူပါက ပိုက်ဆံပေးပြီးမှသာ Order confirm လုပ်ပါမည်။
နေရာ အကျယ်ကြီးရှိတဲ့ အိမ်တွေက၊ ခြံတွေ ရှိတဲ့ အိမ်တွေက ကလေးတွေ ဆော့လို့ အဆင်ပြေမယ့် scooter လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ အရောင် ခြောက်ရောင် ရှိပါတယ်။ လိုချင်တဲ့အရောင်ကို comment / Message / viber နဲ. ဖုန်းမှတစ်ဆင့်ျဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ စောင့်ဆိုင်းချိန် – ရက် ၂၀ ။ ရန်ကုန်က ကလေးများအတွက် မှာယူလိုပါက ပိုက်ဆံကြိုလွဲရန် မလိုပါ။ နယ်က ကလေးများအတွက် မှာယူလိုပါက ငွေလွဲပြီးမှသာ Order Confirm လုပ်ပါမည်။ ဈေးနှုန်း – ၅၇၀၀၀ (Delivery free in Yangon and အဝေးပြေးကားဝင်း)